Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad ka jeediyay 40 guuradda ka soo wareegtay qoraalka Afsoomaaliga | Somaliland.Org
Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad ka jeediyay 40 guuradda ka soo wareegtay qoraalka Afsoomaaliga
December 17, 2012	Jabuuti (Somaliland.Org):- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo weftigii uu Hoggaaminayay ayaa maanta ka qeyb galay xaflad balaadhan oo lagu xusayo afartan sano guuradda ka soo wareegtay qoraalka afsoomaaliga oo maanta lagu qabtay Huteelka Kaambiski ee Magaaladda Jabuuti ee xarunta wadanka Jabuuti.
Waxa xafladaasi oo aad loo soo agaasimay waxa kale oo ka qeyb galay madaxweyneyaasha Jabuuti Md. Ismaaciil Cumar Geelle Iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, aqoonyahano iyo wufuud sar sare oo ka socday dalalka Gobolka Geeska Afrika ee ku hadla Afsoomaaliga.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo xuskaasi khudbad ka jeediyay ayaa u mahad celiyay dawladda jabuuti ee soo agaasintay xuska balaadhan ee loo sameeyay 40-guuradda ka soowareegtay qoraalka Afsoomaaliga.
“Waxaan salaamayaa oo u mahad naqayaa Madaxweynaha Jabuuti Md. Ismaaciil Cumar Geelle oo soo qaban qaabiyay isla markaana hirgeliyay kulankan lagu xusayo sanad guurada 40-aad ee ka soo wareegtay qoraalka Afsoomaaliga, waxa kale oo aan salaamayaa Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud oo ka mid ah madaxda shirkan ka soo qeyb gashay,”ayuu yidhi Madaxweyne Axmed Siilaanyo.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la horumariyo isla markaana bulshadu ilaashato afkooda hooyo ee hodonka ah.
Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu sheegay in markii la qorayay afsoomaaliga uu ka mid ahaa madaxdii tallooyinka laga weydiiyay isagoo xiligaasi ahaa Wasiirkii Qorshaynta dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya. Waxaanu carabka ku dhuftay inuu dhiirigeliyay aqoon-yahanadii qoraysay.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo marti galiyay Shirweynahan ayaa hadal uu ka jeediyay Furitaankii Shirkan waxa uu sheegay in Qoraalka Luuqada Soomaaligu uu meelo badan ka sameeyay horumar waxaanu qiray in dhinaca kalena uu dibad dhacyo dhinacyo badan lihi uu ku yimid.
Madaxweyne Geelle waxa uu xusay in loo baahan yahay sidii xal midaysan looga gaadhi lahaa wax kasta oo saamayn ku yeesha horu kac ay samayso Luuqada Somaligu.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Madashaasi ka hadley ayaa mahad u jeediyey madaxweynaha Jabuuti iyo shacabkiisa ,oo uu ku amaanay doorkii ay ka soo qaateen Hormarinta Afka Soomaaliga.
Shirkan ayaa lagu soo bandhigey Qaamuus aad u weyn oo ka kooban “Todobaatan Kun oo Eray” oo Soomaali ah isla markaana Soomaali lagu sharxaayo,iyadoo Qaamuuskan lagu sheegay inay hawshiisu ay qaadatey muddo dheer oo ka badan 2 sano, waana qaamuus Eray kasta oo soomali laga helayo mid la macno ah,amase u dhigma.
Goobta uu ka dhacay Shirweynahan oo ah Hotelka Kambisi ee Magaalada Jabuuti ayaa ahayd madal ka fog arrimaha Siyaasada iyadoo warku intaas ku darayo in Madaxdii ka qayb gashay ay Kaftan iyo sheekooyin caadiya iswaydaarsanayeen.
Kulankan looga hadlayo afka Soomaaliga ayaa waxaa kaalin muuqata ku lahaa ururka qorayaasha iyo hal-abuurka ee lagu magacaabo (Somali Pen), waxaana ka qaybgalay xubno ka mid ahaa Shakhsiyaadkii qaybta weyn ka soo qaatay qoraalka afka Soomaaliga 40-sano ka hor.
Previous PostBadhasaab Ku xigeenka Maroodi-jeex Oo Ka Hadlay Nabad-gelyadda CaasimaddaNext PostBaki: Xildhibaan Ka Tirsan Golaha Deegaanka oo shaaciyay Inuu Ku Biiray Xisbiga KULMIYE	Blog